गोकुल जी तिमी निर्दोष भएको देख्ने नेपाली जनताको ईच्छा पूरा होस् ! « Pathibhar Online
गोकुल जी तिमी निर्दोष भएको देख्ने नेपाली जनताको ईच्छा पूरा होस् !
राजेन्द्र अर्याल “जब प्रश्न उठ्यो, ठीक होला बेठीक होला, सत्य होला, असत्य होला, एनिमेसन होला, के के होला, सातवटा जोडेर अडियो बनाएको होला, सही होला वा नहोला, त्यो बेग्लै चिज हो । तर, जब एउटा पोलिटिकल मान्छेलाई प्रश्न उठ्छ, उसले यसमा अप्ठ्यारो मान्नु नै हुँदैन र ढ्याक्क राजीनामा दिएको हो । यसमा पिर मान्नु पर्दैन ।यसमा अब अख्तियार, सीआइबी, संसद र पार्टीले पनि छानविन गरेर सत्यतथ्य स्पष्ट गर्नुपर्छ । मेराबारेमा प्रश्न उठेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको छु ।